“Haddii horyaalka aanan ku guuleysan sababteeda labadiinna ayaa leh!” – Robin van Persie oo shaaca ka qaaday sidii uu 2013 u dhaqmay Sir Alex Ferguson – Gool FM
Haaruun March 31, 2020
(Manchester) 31 Mar 2019. “Haddii aanan ku guuleysan horyaalka, labadiinna ayaa u sabab ah, waadna baxaysaan”. Robin van Persie ayaa shaaca ka qaaday in Sir Alex Ferguson uu labo ka mid ahaa xiddigaha Manchester United furka ku tuuray kaddib markii ay guuldarro kala kulmeen Manchester City sanadkii 2013-kii.
Robin van Persie ayaa shaaca ka qaaday sida Macallinkii hore ee Manchester United, Sir Alex Ferguson uu uga carooday labo ciyaartoy oo qeyb ka ahaa guuldarradii ka soo gaartay Manchester City sanadkii 2013.
Man United ayaa guuldarro 2-1 kala kulantay kooxda ay xafiiltamaan ee Man City iyadoo weliba ku ciyaareysay garoonkeeda bishii April sanadkii 2013-kii, markaasoo ay arkeen in dhibcihii ay ku hayeen horyaalka Premier League ay soo yaraadeen oo ay noqdeen 10 dhibcood.
Labo ka mid ahaa xiddigaha Ma United, kuwaasoo uusan Van Persie magacaabin ayaa aaday caweys kaddib guuldarradaas, taasoo ka carreysiisay macallin Ferguson.
Ferguson ayaa sawirrada labadaan xiddig laga soo qaaday, iyagoo caweynayey habeenkii waxa uu keenay qolka labiska, waxaana isagoo careysan uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan wax jira ahayn.
Ferguson ayaa sheegay in ciyaartoydaas ay ku kici karaan inay Man United horyaalka ku guuleysan weyso, isagoo sidoo kale sheegay in qof kasta oo kale oo ku lug lahaa howlahaa la iibin doono.
Van Persie ayaa u sheegay SoFoot: “Maalintii ciyaarta kaddib, Sir Alex wuxuu sawirro dul dhigay derbiga qolka labiska labadan xiddig, kuwaasoo ahaa sawirradii laga qabtay intii ay ku guda jireen caweyska habeennimadii.
‘Waxa uu u sheegay kooxda oo dhan: “Wiilasha, haddii aan ku guuleysan weynno horyaal waxaa u sabab ah labadan wiil ee doortay inay baxaan”.
“Waan garanayaa magacyadooda, laakiin ma rabo inaan shaaca ka qaado, macallinka ayaa gawracay iyaga, waxay ahayd wax layaab leh.”
Hadalka Ferguson ayaa xaqiiqdii lahaa saameyntii la rabay, iyadoo Man United ay ku guuleysatay oo ay hanatay horyaalka Premier League, taasoo caddeysay inuu yahay xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay ee heerkiisa tababarennimo.
Van Persie wuxuu qeyb libaax leh ka ciyaaray Man United isla xilli ciyaareedkaas – Kal ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee kooxda waxa uu dhaliyay 26 gool 38 kulan oo horyaalka ah.
Lionel Messi oo ammaan ugu qubeeyay da'yar ka tirsan Kooxda Chelsea
“Haddii aan markale dhalan lahaa, goolhaye ma aanan noqdeen” - Valdes